Kacha mma Portable Fiber Laser akara Machine BL-PMF30A Manufacturer na Factory | Boln
1.The kọmpat desktọọpụ imewe ， mfe maka iga;
2.The desktọọpụ marking igwe nwere ike dakọtara otutu ike laser iyi;
3.Its ìhè-kaa akara ngwa anya ngọngọ na-eme nke ọma na ájá na-àmà na mgbochi vibration;
4.The abụọ ndu mmanya eweli usoro nwere ihe mụ arụmọrụ;
5.The esịtidem ngwaọrụ nwere ezi ala njikọ na mgbochi nnyonye anya ike;
6.The obere kabinet nwere ike ukwuu ike n'ime mmepụta akara.
7.The akwụkwọ ikike oge bụ afọ 2 na anyị mụ Ọdịdị nwere ike ekwe nkwa 24/7 mmepụta na belata ihe ize ndụ nke ọdịda nke gị mmepụta ka a kacha nta
8. Site na igwe nke ngwanrọ BOLN laser, data di omimi dika onu ogugu, onu ogugu, koodu matriks data, aha ulo oru, otutu otutu, wdg.
9.Marking ọdịnaya gụnyere Oghere Usoro ọgụgụ, ụbọchị formats, oge stampụ, akpaka usoro n'usoro mmanya koodu na nanị otu click, zuru ma ọ bụ akara ederede, okirikiri ederede, 1-D na 2-D Koodu, ndịna na foto, PDF akwụkwọ dị iche iche n'ígwé , faịlụ eserese (jpg, bmp, wdg), faịlụ DXF na PDFs nwere ihe dị iche iche;
10.N'ịtụle nchekwa dị mma, anyị na-eche ọ bụghị naanị nchekwa nke onye ọrụ na-ejikwa sel laser nke klas 2, kamakwa na ọ bụ naanị akụrụngwa dị elu ka ejiri ma ha na-akwado ya nke ọma na arụpụta kwa ụbọchị.
11.The akwụkwọ ikike oge bụ 2 afọ na anyị mụ Ọdịdị nwere ike ekwe nkwa 24/7 mmepụta na belata ihe ize ndụ nke ọdịda nke gị mmepụta ka a kacha nta.
450mm x 380mm x 210mm
Nke gara aga: Desktop Fiber Laser akara Machine BL-DMF20A
Osote: Eriri Laser akara Machine BL-MFP20A / 30A